Utamatisi ne lwesinaphi indlela abandayo. Salting utamatisi nge lwesinaphi: Recipe
Wonke umuntu uyazi ukuthi notamatisi imifino okunomsoco futhi kuzuzisa kakhulu, lapho kukhona izinto eziningi ezidinga nomzimba womuntu: amaminerali, amavithamini. Kungcono ukusebenzisa kwabo unyaka wonke. Futhi indlela yokukwenza? Ngenxa ukugcinwa pickling imifino ebusika. Esikhathini abandayo nobusika utamatisi usawoti athandwa hhayi kancane, kuka ehlobo - fresh. Ngakho-ke, kuyoba kuthakazelisa ukuzwa ukuthi ungakwazi ukupheka utamatisi nge lwesinaphi indlela abandayo.
Waba yini ubumnandi uyakudla ebusika -salted utamatisi okwenziwe kule iresiphi, ngaphandle mhlawumbe elula. izithako ezidingekayo: Ten amalitha amanzi abandayo, abilisiwe noma ukuhlanzwa, amabili izinkomishi ushukela, ingilazi nosawoti pint 9% uviniga, 15 amaphilisi acid acetylsalicylic isipuni lwesinaphi yomile ezintathu-litre jar, utamatisi, horseradish, pepper, okumunyu, garlic, dill . Manje silungiselela utamatisi lwesinaphi indlela abandayo. Chaza usawoti, ushukela kanye aspirin ngamalitha eziyishumi amanzi abandayo, engeza uviniga uhlanganise kahle kuze zonke izithako ziyoncibilika ngokuphelele. Ukusabalala emabhange ivolumu amalitha amathathu wageza obsushennye utamatisi, nese izinongo ezahlukene. Phezulu ungqimba baba spoon isipuni lwesinaphi elomile bese ugcwalisa isixazululo. ikhava Inayiloni ivinjelwe umzuzwana emanzini ashisayo bese uvale kubo amabhange yethu. utamatisi anosawoti nge lwesinaphi ngomumo. Thina uwafake isitoreji endaweni epholile futhi ezinyangeni ezimbili nawe ungadla.
Labo ungafuni ebusika sokumukisa utamatisi esihlwabusayo kanye namanzi singaba usizo kabi iresiphi esilandelayo. Ukusebenzisa ke, uphakamisa ngokwakho kuze kuhlwe ngakusihlwa nesithwathwa, ezihlukahlukene zabo ukudla ebusika. Futhi ubuyise umzimba nge izinto eziwusizo, bohlu lozalo okuyinto kancane sikhathele siyingcuba. Uzodinga izithelo ezincane noma naphakathi ukuthi uvuthwe phakathi ehlobo - ngoJulayi. Ukupheka utamatisi nge lwesinaphi ebusika. Okokuqala badinga sokulungisa, ezidlikizekile, esishwabene, bahlukaniswe - ukususa, ngoba ayifanele pickling. Ngale ndlela, eRussia ngokwesiko anosawoti imiphongolo noma amathini. Ngakho begeza utamatisi bafakwa isitsha ekhethiwe. Manje thina uqhubekele ukulungiswa brine. Kuyinto kangcono imifino yethu ebomvu 9-10% isixazululo. Gcwalisa ithangi nabo utamatisi, engeza izinongo. Ungakhohlwa ngalokho condiments wenza eRussia ukubeka notamatisi. It - cherry noma currant amahlamvu, horseradish, dill, emnyama, i-bay leaf. Lamakha ukunambitheka bese wengeza clove ambalwa garlic. Yiqiniso, ningakukhohlwa lwesinaphi. Cover akusho ukuvala, kuncike izinsuku eziyishumi emazingeni okushisa okuvamile. ezingeni uketshezi phakathi nalesi sikhathi uzokwehla, kuyoba izibhelu. Khona-ke amabhange Roll up bese uya egumbini elingaphansi noma emiphongolweni. Utamatisi ne lwesinaphi Cold isilungele ebusika.
Recipe №3, ukucabanga kancane
Kungani indlela eyayithandwa kuphole ke? Futhi ngoba ngomumo lapho imifino bheka ngokomzwelo okungokwemvelo, abangafuni lokukhunta, bunjalo futhi akukho imibimbi. Futhi brine cishe esobala ngokuphelele, ngaphandle ukuthi kancane nje, ngenxa microflora izinhlayiya ingavuthi esinamafu. Ngaphambili, ngasendleleni, utamatisi e amathini ne lwesinaphi ayikalungi. It has lonke fancy ka hostesses yethu. Kunezindlela ezahlukene ukuze alungiselele brine uhlanganise lwesinaphi. The main wabo - ukulondolozwa ashisayo nabandayo. Indlela yesibili ikakhulukazi bendabuko zokuyithambisa utamatisi akuhlukile, kodwa kuqala - indlela elula yokuqala ukuzama utamatisi anosawoti nge lwesinaphi. Inketho ngosawoti Cold, njengoba sekushiwo, oholela kangcono kanye neqiniso lokuthi ungasebenzisa ngisho sekudlule isikhathi eside imifino ezivuthiwe, abazi wavele, futhi ugcine ibukeka kahle. Ngezansi eyodwa nje zokupheka njengoba utamatisi nge umpheki lwesinaphi indlela abandayo.
Izithako kanye nokulungiselela esigabeni
Sidinga utamatisi - 2.5 kg, amanzi - futhi ilitha isigamu, usawoti - kwesigamu Cutlery spoon, ushukela isihlabathi - nezinkezo ezintathu, pepper - uphizi eziyishumi, clove - 5 izingcezu, i-bay leaf - izingcezu ezine, lwesinaphi powder - isipuni, ngoba ozikhethela - basil, dill, horseradish amashidi, cherry kanye currants. kusengaphambili inzalo izimbiza Kunconywe kanye zamabhodlela wenza, kusukela brine ezibandayo uzobe batheleka ukulondolozwa efanayo abandayo. Ungenza lokhu ngezindlela ezimbili - steamed, njengoba kwenza enye ka ogogo bethu, noma lamadolobha esimanjemanje kakhulu. Okuhle ezimanzi amabhange yami uwafake imizuzu 7-10 e-microwave oven noma imizuzu engu-10 kuhhavini ezingeni lokushisa 130-150 degrees. Khumbula ukuthi isivalo sensimbi ngendlela ayikwazi inzalo. Kuhhavini iyogcwala amanzi gasket iraba ku usebe futhi ku-microwave, bona agcwala nokulimaza iyunithi. Ngakho-ke, sisebenzisa indlela endala - ukubilisa kubo imizuzu 10 emanzini.
Susa umsila kusuka utamatisi ekhethiwe futhi ezinhle yami. Sibekwa ebhange, ukuxubana izinongo: fennel, amaqabunga cherry, black currant nabanye. Ungakwazi ukwengeza nopelepele noma garlic, uma umndeni wakho uthanda okubabayo, kodwa bheka, Ungeqisi it. Esikhathini pickling ashisayo utamatisi ngabe udinga isikhathi esingaphezulu uthele le marinade hot phezu kuphekwe bese wengeza isipuni lwesinaphi ekupheleni. Silungiselela utamatisi nge lwesinaphi inqubo abandayo, ngakho senza lokhu okulandelayo. Ngo amanzi abilayo, ushukela kanye nosawoti, i-bay leaf ne pepper uphizi. Thina uhlanganise, imenze ngamathumba, ususa emlilweni futhi unike cool ngokuphelele. Sabe engeza lwesinaphi, ziyoncibilika. Marinade kufanele kukhanye ke sigcwalisa kubo izimbiza zamabhodlela Roll up. Yikuphi, isimiso, kungaba kanjani ukuthandwa njengoRaheli ithini plastic. Isitolo izimbiza ngendlela omnyama, endaweni epholile.
Recipe №4: utamatisi pickled nge lwesinaphi. imiyalelo Jikelele
Bangaki imifino kudingeka? Cishe abathathu khilogremu "cream", ngokwanele ukuze bakwamukele amathini amabili ivolumu amalitha amathathu. Futhi ulungiselela salting okubizwa ngokuthi "umshanelo", okuyinto okuthengiswa ugogo emakethe. Kuhlanganisa amagatsha currant, cherry, dill, fennel kanye horseradish amahlamvu. Ukukhetha nje "cream", bajwayele kakhulu, ziqukethe ndaba wome kakhulu futhi elakhelwe ukuwafaka. Bheka, lokho kwakungeve kungenxa induku emhlophe ngaphakathi utamatisi. Lokhu ngeke kuvunyelwe. Ngaphakathi utamatisi kufanele kuphela nombala obomvu.
Ukupheka utamatisi pickled
utamatisi Leachable ngamanzi abandayo, iphula imisila. Ngokucophelela "umshanelo" lami, uthathe yizicucu ubude ummese abavamile nge umdlalo, uhlanganise, ukwakheka waba iyunifomu. Manje ukulungiselela utamatisi nge lwesinaphi pickled. Sabalalisa uhhafu ongezansi namakani "umshanelo", Ufaka a leaf bay - izinto ezimbili, emnyama - ukuze uphizi eziyishumi, clove - efihlekile ezimbili, allspice - ezintathu ipea. Ukwenza nosawoti isixazululo ngasinye amathini kumele kube ngu-60 amagremu kasawoti. Chaza 120 amagremu ke ngesigamu ilitha lamanzi abilayo. Ungazami ukusebenzisa usawoti iodized, thatha evamile kakhulu - itshe elikhulu. Ngokulinganayo ngqo izinongo "umshanelo" igeleze ikhambi ashisayo. Manje ukubola utamatisi, ukukwenza ngaphandle ngentshiseko enkulu kangakanani. Futhi, kanye notamatisi, wathumela ebhange ugarliki ngaphandle uyaxebuka kubo. Top - asele "umshanelo". Isipikili up ngamanzi abandayo kanye hexanoic lokuvala isivalo. Swings embizeni encane, flip i don inversely - ukuba usawoti kuwo wonke.
Sabeka izimbiza bethu utamatisi efasiteleni, kodwa ukuze elangeni angawi kubo. Siyaligodla ngakho izinsuku ezintathu. Brine phakathi nalesi sikhathi uzoqala izule. Ukuvuna ku esiqandisini amasonto amabili futhi ningathinti, uzivumele utamatisi kvass. Uma une ndawo, ukubeka khona uma ithole abandayo emgwaqeni, bese - on emphemeni. Ngemva kwamasonto amabili, salting utamatisi nge lwesinaphi igcwaliswe. Ungavula imbiza ukususa isampula. Kuleso simo, uma kwenziwe ngendlela efanele, okufanele wobuciko ngempela. Bon appétit!
Yini kungcono ukukhetha isidlo esishisayo kuthebula iholide
Drum utamatisi: kungenzeka ukwenza salting endlini emabhange?
Lungiselela amaswidi, ajwayelekile kusuka ebuntwaneni: Sausage bhisikidi iresiphi
Indlela ukupheka risotto nge inkukhu yokudla multivarka
Isidlo Baked: inyama French nge amakhowe, inyama abanamakhono, fries French nge amakhowe.
Lungiselela amakhukhi okumnandi futhi ezinhle kakhulu 'Curd angiqabule "
Zaz-968A: Ukucaciswa nezithombe
"Enterol 250" (powder): imfundo izingane kanye nabantu abadala. Analogue, amanani, ukubuyekezwa
Yini ukuba adle esitolo wathenga hummus?
Demi-inkathi elingenamikhono kanjani ukukhetha?
Veza Auto Sales Ngemva Ingozi
Ukwelashwa nokuvikelwa gel kwamazinyo "Holisalom". Ukubuyekeza, izincazelo ukulungiswa
Zikanokusho kahle maphakathi no-ontengo yakhe yayinqunyiwe smartphone Lenovo k3 Qaphela ububanzi. Bukeza izici le gajethi ne isikhundla womnikazi wayo ezingaba
"Dimexidum" (gel): izinkomba ukusetshenziswa, imfundo manual, analogue, ukubuyekezwa
"Fenoterol": yokusetshenziswa, Izimo, futhi ikakhulukazi reception kungenzeka
Indlela futhi kuphi ukukala lokushisa komzimba (i-algorithm). Ukulinganisa izinga lokushisa komzimba ezinganeni